A ga-ekwupụta Nubia Z18 na Septemba 5 | Gam akporosis
N'etiti ọtụtụ asịrị na ịkọ nkọ banyere ekwentị Nubian na-abịanụ, Ndị enyemaka ZTE ekwuputala ọkwa ọzọ dị elu, Nubia Z18, maka September 5 na-esote.
Nke a ka ị mere site na Weibo, netwọkụ na-elekọta mmadụ na China, ụzọ ndị ụlọ ọrụ Asia na-esi eme ọkwa, dị ka Meizu, Huawei na ụdị ndị ọzọ amaara ama. N'ebe ahụ, site na posta, Nubia kwupụtara ozi a.
Dabere na post na Weibo, A ga-ekwupụta Nubia Z18 na September 5. Nke a bụ otu ụbọchị ntọhapụ na Na-asọpụrụ 8X, na mgbakwunye na ngwaọrụ ndị ọzọ, dịka anyị na-echeta na ọ bụ ụbọchị ikpeazụ nke IFA na Berlin, Germany, na, n'ime ihe omume ahụ, a ga-ewepụta ọtụtụ mobiles. N'ihi eziokwu ahụ bụ na ụbọchị a dabara na nke a, a na-atụ anya na a ga-ekpughere ọnụ ya na ngosipụta teknụzụ a.
Na-ajụ ihe ndị ọzọ gbasara ihe Nubia na-echere anyị, akwụkwọ mmado ahụ gosipụtara onyinyo nke ekwentị ma kwenye na ga-abịa na obere minimalist yiri Mkpa PH-1 na Oppo F9.
Na mbụ, ndepụta TENAA nke Nubia Z18 gosipụtara na ekwentị ahụ ga-enwe 5.99-inch diagonal FullHD + na mkpebi nke 2.160 x 1.080 pikselụ (18: 9).
Chọpụta: Nubia Z18 gosipụtara na Geekbench tinyere nkọwapụta ya
Ọ na-atụ anya na-kwadoro site na a Qualcomm Snapdragon 845 processor na 6 GB nke Ram na isi ihe nlereanya na 8 GB nke Ram na ụdị kachasị elu. Nchekwa ga-abụ 64GB na 128GB n'otu n'otu. Maka optics, Nubia ga-emejuputa ngwungwu 24MP na 8MP abụọ na azụ, ebe ihe mmetụta 8MP foto ga-adị na ọkwa dị elu karịa ihuenyo ahụ.
N'ikpeazụ, smartphone ga-abịa na onye na-agụ akara mkpịsị aka n'azụ na teknụzụ ihu ihu. Na mgbakwunye, ihe niile na-arụtụ aka ga-abata na batrị 3.350 mAh na gam akporo 8.1 Oreo dị ka sistemụ arụmọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » ZTE ga-eweta Nubia Z18 nke a na-esote Septemba 5